နိုဝငျဘာ ၆, ၂၀၁၇ - ၁၀:၅၄ ညနေ News Code : 865098 Source : ABNA Link:
ဟိုစိုင်း(န) နီ (အ.စ) တော်လှန်ရေး ၏ ရည်ရွယ် ချက်များ
ဟဇရတ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ အလ်ဟဂ်ျ နာစေရ် မကာရေမ်မိုရှီးရာဇီး
ဟွဂ်ျဂျသွလ်အစ္စလာမ် အဗူလ်ကာစင်(မ်) အလီယန် နေဂျာဒီ
The World federation ot Khoja Shia Ithna- Asheri Muslim Communities
ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်နှင့် ကိုယ်တော် ၏သာဝကတော်များကို ချစ်ခင်နှစ်သက် မေတ္တာထားကြပါသည်။ကိုယ်တော်အတွက် အဇာဒါရီများပြုလုပ်ကြပြီး မျက်ရည်ကျခြင်း၊ငိုကြွေးခြင်း၊မာတမ်ပြုခြင်းတို့ကို ပြုလုပ် ပါသည်။ရင်ဘတ်နှင့်ခေါင်းကိုရိုက်ကြပါသည်။အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီးများ၊အအို၊လူ ပျို၊လူရွယ်များ၊ယုတ်စွအဆုံး ကလေးသူငယ်များပင် ဤမြင့်မြတ်သည့် အချစ်မေတ္တာ တွင် ပါဝင်နေရာယူထားကြပါသည်။
ယုတ်စွအဆုံး မြောက်များစွာသော် မွတ်စလင်မဟုတ်သူများသည်လည်းပဲ ဤ လုပ်ဆောင်မှု(အဇာဒါရီ)တွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ရှိနေပါသည်။ဒုက္ခအခက်အခဲများ တွင် ကိုယ်တော်(အ.စ)အား အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံတော်ဝယ်မိမိတို့၏ ရှဖီးအ် (အသနားခံပေးသူ)အဖြစ် သတ်မှတ် တောင်းဆိုကြပါသည်။ကိုယ်တော်၏သန့်ပြန့်၊ သန့်စင်သည့်မြေ(ကရ်ဗလာမြေ)အား နမ်းကြပါသည်။ကိုယ်တော်၏ ကဗဲရ်ဂူဗိမာန် အား ဇေယာရတ်ပြုရန်သွား ကြပါသည်။ကိုယ်တော်(အ.စ)၏ ကရ်ဗလာမြေအား ကျွန်တော်တို့အတွက် ကာကျယ်(မျက်ခွံ၊မျက်ခမ်းဆိုးဆေး)အဖြစ် အသုံးပြုကြပါ သည်။(အလေးအမြတ်ထားပါသည်။)
သို့သော် ကိုယ်တော်(အ.စ)သည် ရဲရင့်မှု၊သတ္တိ၊ဗျတ္တိရှိမှု၊(ရန်သူအား)မ ကြောက်မရွံ့၊မတုန်လှုပ်မှု၊လွတ်လပ်ရေးမြတ်နိုးမှု ၊ ပြည့်စုံသည့် စံနမူနာ ကောင်းများ ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးမည်သည့်အထောက်အထားကြောင့်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏လမ်း တော်တွင် ရှဟာဒသ်ဘွဲ့ကို ခံယူရပါသနည်း?
ထိုပြင် ကိုယ်တော်၏ ဤတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲနှင့် ရှဟာဒသ်သည် မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသနည်း? (ဤကဲ့သို့သိရှိပါမှသာလျှင်)ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် လည်း(စစ်မှန်သည့်)လွတ်လပ်ရေး၏ ဦးဆောင်၊ဦးသျှောင်အား စံနမူနာယူနိုင်ပေ မည်။၎င်းပြင် ကျွန်တော်တို့အားလုံး၏ အဇာဒါရီများ၊ဇေယာရတ်များသည်လည်း (عارفاً بحقّه)ဆိုသည့်ဝါကျနှင့် ညီသွားပေမည်။
ဤစာအုပ်သည် အထက်ဖေါ်ပြပါ မေးခွန်းအား အဖြေပေးထားပါသည်။အေ မာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)တော်လှန်ရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို အကိုးအကား၊အ ထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံ တင်ပြထားသည့် ကိုယ်တော်(အ.စ)၏ခွသ်ဗာတော် များ၊ဩဝါဒတော်များ၊ကရ်ဗလာသမိုင်းများဖြင့်(အမှန်တရားမြတ်နိုးသူ)အားလုံးအ တွက် ရိုးရိုးလေး ရေးသားသီကုံး စီစဉ်ထားပေးပါသည်။
၁။ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏တော်လှန်ရေးရည်ရွယ်ချက်များ ................................................................. ၂။ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်ကြီး၏အလုပ်တော်များ၊ ရည်မှန်းချက်၊ရည်ရွယ်ချက်များ..................................
၃။ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရှုထောင့်မှ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်တော်များ.......................
(၁)စကြာဝဋ္ဌာကို ဖန်ဆင်းရသည့် ရည်ရွယ်ချက်..................................................................................
၆။ ပထမ ရည်ရွယ်ချက် .................................................................................................................
၇။ အေစ်လာ(ဟ်)(ပြုပြင်ပြောင်းလဲတည့်မတ်ခြင်း)ဝေါဟာရ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်...................................
၉။ အစ္စလာမ်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏လက်ထက်တွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တည့်မတ်ပေးခြင်း.......................
၁၀။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ခြင်း! ……………………………………………………………………………………..
၁၂။ အေစ်လာ(ဟ်)ရည်ရွယ်ချက်၏ဆိုလိုချက် ................................................................................
၁၄။ကောင်းရာ၊ကောင်းမှုကို ညွှန်ကြားခြင်းနှင့် မကောင်းရာ၊မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်း.....................................
၁၈။ အမရ်ဗေမအ်ရူဖ် ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ်မှပေးသည့်သင်ခန်းစာ.........................................................
၂၀။တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ စွန္နတ်တော်များအား ရှင်သန်တည်မြဲအောင်ပြုခြင်း....................................
၂၄။အမှန်တရားဘက်မှ ကူညီဖေးမခြင်းနှင့် အမှားမတရားနှင့် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်း.......................................
(၄)စတုတ္ထနေရာ-ယဇီးဒ်(လ.န)ကဲ့သို့ ပုဂ္ဂိုလ်ထက် အစ္စလာမ်မီအချုပ်အချာအာဏာကို လွဲပေးလိုက်ခြင်း .......
၂၆။ဤစတုတ္ထ ရည်ရွယ်ချက်မှ ပေးသည့် သင်ခန်းစာ.............................................................................